Tsy maty fa matory i Dox | 102 KARA
Tsy maty fa matory i Dox
Tsy nisy angamba tsy nahalala an’i Dox izay mpanoratra fanta-daza tokoa.
Jean Verdi Salomon RAZAKANDRAINY no anarany, ary na dia efa nodimandry aza izy dia mbola tsy afaka an-tsaina sy manakoako ny zava-bitany. Avy amin’izany indrindra no anisan’ny nankalazana ny faha-100 taona nahaterahany.
DOX mifoha : io izao no loha-hevitra itondrana sy amohafohazana indray ireo diam-penin’ity mpanoratra ity ao amin’ny Foibe ara-tsaina malagasy sy alemà ny 27 jolay ho avy izao .
Ny iray amin’ny zanak’i Dox dia i SORAJAVONA no nilaza fa betsaka ireo lahatsoratra nosoratan’ny rainy kanefa dia mbola tsy tafavoaka ho fanta-bahoaka. Koa araraotina ny fotoana toy izao mba ampahafantarana azy ireny.
Ny mpikambana ao amin’ny Faribolana Sandratra no hanaingo sy hanome hasina ity fotoana ity ka hanisy mozika eny an-tsefatsefany eny.
Hisy afon-dasy ihany koa eny Antanety Ambohijoky ka hampisongadinana ny halalina sy hakanton’ny HAISOTRA napetrak’i Dox.
Izany tokoa no tonga amin’ny hoe :
» Ny maty namela mangidy tsy misy mpitia velively
Fa ny maty namela ny mamy toa an-dry Dox kosa
29 juillet 2013 - 15 h 35 min Culture 2395 vues